トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Go'aamiyaan dukaamo fiican in qowladda pachinko dhacdooyinka
Waa maxay nooca dukaanka pachinko ama ku talinaynaa sameynayo dhacdo, waxaan eegi doonaa haddii ay qaado meesha la go'aamiyo.
■ bishii hal dhacdo calaamad
First of dhan, waa qowladda pachinko ah, taas oo lagu qabtay munaasabad calaamad bishiiba hal mar. In qowladda pachinko dhigata oo idinka mid ah, isku day inaad si loo xaqiijiyo in aad haysato dhacdo calaamad.
maxaa yeelay, maalintii la soo qabtay dhacdo calaamad, Dattari Open Taariikhda dukaamada, maxaa yeelay, maalintii inta badan waa macnaha gaar ah, waxaa la dhigay wax sabab, waxaa la isku dayaya karaa si loo darso heshay of Waxaa jira.
Mararka qaarkood, taariikhda dhamaadka isla maalintaas, laakiin waxaa jira qowladda pachinko oo sheeganayay inay dhammaan dhacdooyinka boor, dukaan pachinko sida, kubada baxay a, sababtoo ah waa wax fudud oo kala firdhiyey by maalinta, meel ku soo kabashada ee maalintii waa waa macquul ma tahay in la siiyaa.
Si kastaba ha ahaatee, haddii bisha ugu horreysa, sababta oo ah waxa ugu adeega xoogga saaraan, waa in dhabar jab ku ah kubada baxay ka badan qowladda pachinko ah, sida gelinayn hore waaweyn.
si kastaba ha ahaatee, weli loo yaqaan dhacdo calaamad, maxaa yeelay, waa qowladda pachinko weyn in waddaa in ay dib u soo kabashada faa'iidada, weli aad u baahan tahay si aad u hubiso oo dhan dareen heshay la indhahayga u gaar ah. Or, aad u hubiso in aad rabto in aad isticmaasho adeegyada sida site Robo xogta Toddoba.
■ farqiga u dhexeeya saacadaha u dhexeeya dhacdo furan
sida caadiga ah waa, laakiin waxa aad socda subaxdii, waxaa si 15 SFIga oo la furay iyo 19 saac furan, waxaa jira dhacdooyin waa in la yareeyo waqtiga qalliinka. Haddii wakhtiga socda waa gaaban, waxaa laga yaabaa in ekaan sidii aan dib u soo kabashada ah, dhab ahaantii ay qeybsanaan ku xigeenka a. In qowladda pachinko ah, laakiin waxaa laga yaabaa in mararka qaarkood sidoo kale in lagu daydo oo caan ah, salka iyo sidoo kale qaban doontaa munaasabad ay ku daydo aad rabto in la kordhiyo howlgalka sida. Waxa ay doonayaan in la kordhiyo orodka
, waxa kale oo uu noqon doono xaqiiqda ah in dooneynin inuu ka tago fikrad wanaagsan. Iyo sidoo kale dukaan ee lagu daydo oo caan ah, dhacdadan waxa badanaa lagu sameeyaa daydo sida aad rabto in aad isticmaasho dheer.
sida caadiga ah, xitaa nooca daran ee model iyo sixitaanka cidiyaha in uusan wax badan ku riday go'an, marka farqiga u dhexeeya saacadaha u dhexeeya dhacdooyinka furan, waxaan marar badan ka khayr badan sida caadiga ah. Sidaa daraadeed, dukaan pachinko kaas oo sidoo kale soo qaaday dhawr jeer bishii farqiga u dhexeeya saacadaha u dhexeeya dhacdo furan, waxaa loo gudbin doonaa talinaynaa.
Si kastaba ha ahaatee, marka tani waa cad ama ahaa daydo nacaayo, si aad u siin sidoo kale waxaa jira xaqiiqada ah in "Waxaad sidoo kale ka soo kabsaday oo kaliya wax yar ka hor ka kaxayntu ay ...", in ilaa halkan, dukaan Ya siyaasadda ganacsi ka caadiga ah waxaa jira doono baahan yahay in ay baaraan sababta oo ah isku halaynta.
■ haddii ay dhacdo
, sida grounder isku daro, dhacdo sida kulanka in grounder magaca model iyo taariikhda, isku day in la ogaado in jaaniska sare ee dhacdooyinka Gase soo jiitaan macaamiisha ujeedada.
kuwanu waa sheeko arrimuhu kaliya ee, waxa aanu ka dalban oo dhan. Tan iyo markii ay dukaanka si ay u doortaan si weyn u saameyn doono pachinko ee guul ama guul darro, waxaan u baahan nahay in ay baaraan sifooyinka iyo isbeddellada wadasocodka qowladda pachinko ka ayaa sidoo kale sidii caadiga ahayd dhib. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad saaray noocan oo kale ah yardstick madaxa, waa sheeko ..., Taasi wax aan la arki karo ilaa hadda u muuqdaan. Dhacdooyinka sida kuwa, isku day in la ogaado in jaaniska sare ee dhacdooyinka Gase soo jiitaan macaamiisha ujeedada.
kuwanu waa sheeko arrimuhu kaliya ee, waxa aanu ka dalban oo dhan. Tan iyo markii ay dukaanka si ay u doortaan si weyn u saameyn doono pachinko ee guul ama guul darro, waxaan u baahan nahay in ay baaraan sifooyinka iyo isbeddellada wadasocodka qowladda pachinko ka ayaa sidoo kale sidii caadiga ahayd dhib. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad saaray noocan oo kale ah yardstick madaxa, waa sheeko ..., Taasi wax aan la arki karo ilaa hadda u muuqdaan.